देश: News Of Tokha
राष्ट्रपतिका लागि वाम गठबन्धनबाट विद्यादेवी र कांग्रेसबाट कुमारी लक्ष्मीको उम्मेदवारी दर्ता
काठमाडौं, फागुन २३ – वाम गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारीले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट कुमारी लक्ष्मी राईले केहीबेरअघि राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नु भएको छ । बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवन परिसरभित्र स्थापना गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर भण्डारी र राईले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको हो । भण्डारीको प्रस्तावकमा नेता माधव नेपाल, भिम रावल, इश्वर पोख्रेल, सुवास नेम्वाङ र ओनसरी घर्ती हुनुहुन्छ । त्यस्तै उहाँको समर्थकमा नेता रामबाबु थापा, विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट, भानुभक्त ढकाल र रविन्द्र अधिकारी रहनुभएको छ । राईको प्रस्तावकमा चित्रलेखा यादव, मानवहादुर विश्वकर्मा, पार्वत डिसि चौधरी, देवेन्द्रराज कँडेल र सुरेन्द्रराज पाण्डे रहेका छन् । यस्तै समर्थकमा सरिता प्रसाई, सूजता परियार, मेखलाल �...
प्रतिनिधिसभा बैठक अहिले चलिरहेको छ । बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षठ नेताद्रावरा सम्बोधन गर्ने कार्य भैरहेको छ । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भिडियो स्रोत न्युज एजेन्शी नेपाल...
१५ फागुन, काठमाडौं । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री बन्ने तयारीमा थिए । तर, उपप्रधानमन्त्रीबिनाको रक्षामन्त्रीमा चित्त बुझाउन बाध्य भए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच उपप्रधानमन्त्री नराख्ने सहमति भएका कारण पोखरेल उपप्रधानमन्त्री भएनन् । तर, प्रधानमन्त्रीपछिको बरियतामा राख्न दुवै नेता सहमत भए । ईश्वर पोखरेलका लागि मन्त्री पद अहिलेसम्म सुखद भएको छैन । संख्याको हिसाबले उनी तेस्रोपटक मन्त्री भए । यसअघिका उनका दुबै कार्यकाल बिर्सनलायक छन् । पहिलोपटक ०६१ सालमा प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै एमालेले शेरबहादुर देउवाको सरकारमा पोखरेललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाएर पठाएको थियो । सात महिना कार्यकाल नपुग्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवा सरकारलाई बर्खास्त गरेपछि पोखरेल मन�...
काठमाडौं । नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरुको सूचीमा १२२ औं स्थानमा परेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले १८० वटा देशहरुलाई समेटेर भ्रष्टाचार सम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांक सार्वजनिक गरेको छ, जसमा ९ स्थान माथि उक्लिँदै नेपाल ३१ अंकसहित १२२ औं स्थानमा देखिन्छ । गत वर्ष नेपाल १३१ औं स्थानमा थियो । सन् २०१७ को नयाँ प्रतिवेदनमा नेपालको स्थितिमा केही सुधार देखिए पनि सन्तोषजनक भने छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार ४० भन्दा कम अंक ल्याउने देश निकै भ्रष्टाचार हुने भनेर चिनिन्छन् । राजनीति, वित्तिय अनुशासन, न्यायमा पहुँचलगायतका ६ वटा मापदण्डको आधारमा देशहरुलाई शून्यदेखि १०० सम्म अंक दिइन्छ । ० अंक पाएमा सबैभन्दा भ्रष्टाचार हुने र १०० अंक पाएमा भ्रष्टाचार हुँदै नहुने भनेर छुट्याइन्छ । सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा न्यूजील्याण्�...
अब पुनर्निर्माण अनुगमन अनलाइनबाटै
काठमाडौं, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण कुन चरणमा पुग्यो ? कुन संरचनाको पुनर्निर्माणमा कति खर्च गरिँदैछ ? कुन दाताबाट कति रकम सहयोग प्राप्त भयो ? अहिले सबैले चासोका साथ उठाउने प्रश्न हुन् यी। पुनर्निर्माण कार्य सुस्त बनिरहँदा यसबारे यथार्थ जानकारी पाउन पनि सहज छैन । जसले गर्दा हाल पुनर्निर्माणमा भइरहेको खर्चको पारदर्शिताबारे प्रश्नसमेत उठिरहेको छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा गरिरहेको खर्चको पारदर्शिताबारे अझ बढी प्रश्न उठ्ने गर्छ । आफ्नोतर्फबाट उपलब्ध गराइएको सहयोग दुरुपयोग हुन नदिन दातृ निकायहरुले पनि विशेष चासो दिँदै आएका छन्। अब भने यी प्रश्नहरुको जवाफ अनलाइनबाटै लिन सकिने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसलाई सम्बोधन गर्न बुधबारबाट ‘परियोजना अनुगमन सूचना प्रणाली (पिएमआइएस)’ �...
सात बुँदे सहमतिसहित एमाले र माओवादी एकता टुंगियो
मंगल, फागुन ८, २०७४
काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता सोमबार मध्यरातबाट टुंगिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एकता संयोजन समितिको बैठकले ७ बुँदे सहमति गर्दै एकता निश्कर्षमा पुर्याएको हो । यस्तो छ सहमति १, एकीकृत पार्टीको सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद रहनेछ। २, एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादको शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिष्पर्धा र शान्ति सम्झौतापछि माओवादीको शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धा समान नीति। ४, एमालेको जबज र माओवादीको माओवाद र २१ औँ शताब्दीमा जनवादको विधिसम्मत छलफल र परिमार्जन गरिनेछ। ५, अन्तरिम विधान तयार गरिनेछ। ६, प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गरी सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण गर्दै समाजवादको आधार तय गरिनेछ। ७ अबको महाधिवेशन एकता महाधिवेशन हुनेछ। सहमतिमा केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, पुष्प...
जाजरकोट- रु २३ लाख खर्चेर निर्माण गरिएको सिँचाइ योजना पाँच वर्ष नबित्दै प्रयोगविहीन भएको छ । जिल्लाको नलगाड नगरपालिका–८, हल्चौरमा रहेको सिँचाइ योजना ५ वर्ष पनि नटिकेको हो । स्थानीय मुलाखोला मुहानबाट पानी ल्याई हल्चौर गाउँका ३०० भन्दा वढी घरधुरीलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने भनी सिँचाइ योजना निर्माण गरिएको थियो । ५ वर्ष नबित्दै हल्चौरका स्थानीयवासीले सिँचाइ सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । लिली हेल्भेटासको आर्थिक सहयोगमा मुलाखोलाबाट पाइपमा पानी ल्याई हल्चौर गाउँमा पाँचवटा प्लास्टिक पोखरीमा पानी जम्मा गरी स्थानीयवासीलाई सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले योजना निर्माण गरिएको थियो । योजना निर्माण गरेको ५ वर्ष बित्न नपाउँदै अहिले प्लास्टिक पोखरीको नाम निसान नै नभएको स्थानीयवासी गोरखबहादुर विकले बताउनुभयो । स्थानीय उपभोक्ता �...
काठमाडौँ । गणतन्त्र स्मारक निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । विसं २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र स्थापना भएपछि सरकारी पहलमा नारायणहिटी दरबार परिसरमा निर्माण थालिएको स्मारकको काम सकिएको हो । सरकारले विसं २०६९ मंसिरमा बिकोई स्काई बंगलामुखी ज्वाइन्ट इन्भेन्चरसँग सम्झौता गरी तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने भने पनि निर्माणमा केही ढिलाइ भएको थियो । कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक रोशन श्रेष्ठले स्मारक निर्माणको काम पुरा भएकाले यही महिना भवन विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । “स्मारक निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न गर्ने गरी काम गरेका थियौँ, भूकम्प र भारत सरकारले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले केही समय ढिला गरी सम्पन्न भएको हो”, उनले भने । भवन विभागले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा उद्घाटन गर्ने योजना बनाएको श्रेष्ठले बताए । रासस...